डेनिम - यो फैशन र व्यावहारिक छ
किन कपडा यस प्रकारको, को कपडे कुनै न कुनै छ - सामाग्री धेरै लोकप्रिय छ? पुरातन समयका किनकी यो कारण यसको स्थायित्व ठूलो पहिचान पनि जितेको छ। मिति, डेनिम पनि स्टाइलिश र फैशन लुगा को tailoring लागि एक महान विकल्प छ। साथै उद्योग र पर्यावरण क्षरण को गहन विकास प्रकृति गर्न कहिल्यै ठूलो thrust मानिसजातिको योगदान रूपमा, मान्छे प्राकृतिक सामाग्री प्रयोग गर्न रुचाउँछु। सबै भन्दा साधारण सनी छ। थप विवरण यस प्रश्नको विचार गर्नुहोस्।
कुनै न कुनै सनी कपडे। कथा
सन मान्छे प्रारम्भिक को Neolithic अवधि रूपमा खेती गर्न थाले। हाम्रो युग अघि छ। कपडा कुनै न कुनै सन स्विट्जरल्याण्ड मा प्राचीन बस्तियों उत्खनन समयमा फेला परेन। यो संग्रहालय, यस्तो नमूनाहरू भण्डारण र वर्तमान दिन हो। मिश्री फिरऊनको र यस्तो सामाग्री को टुक्रा को रहलपहल मा पछि पाइएको छ।
भित्तामा चित्र अनुसार, मा भित्ति चित्र र चित्र ग्रीक vases सन फाइबर प्राप्त मा देख्न सकिन्छ। तिनीहरूले कसरी समयमा बोट सम्हाल्न बुझ्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। सन twitching, Steles, सुकेको, patted, vychosyvali र हात काता।
समय, भौतिक व्यापक फारस, रोम, मेसोपोटामिया, भारत, अश्शूरका र रूस मा प्रयोग भएको थियो। विशेष गरी यसको सफाई र निको गुण को लागि, श्रद्धा र आदर सन लागू हुन्छ।
तसर्थ, यस समय-खपत प्रक्रियाको मुख्य चरणमा। कुनै न कुनै सनी कपडे को संयोजन र उत्पादन पराल को मद्दतले बोट संग्रह द्वारा उत्पादित हुन थाल्छ। उनको शीत संग भिगो, फील्ड सप्ताह को एक जोडी बाहिर फैलाउन stems।
प्राथमिक उपचार निम्न। यो सुकेको छ र myate Trepanier। कि पछि - एक कताई मिल। सन vychosyvaetsya, therefrom गठन टेप, को roving प्राप्त (पातलो रिबन र साफ) छ जो।
अर्को चरण - बुनाई। कपडा दुई किसिमहरु प्रणाली एक मिसिन मा गरे। यसबाहेक, भौतिक प्रक्षालित र रंगा छ।
उत्पादन बर्बाद इन्धन रूपमा प्रयोग गरिन्छ। र तिनीहरूलाई केही विभाजन पर्खाल लागि बोर्डहरू छन्। तिनीहरूले पनि फर्श को उत्पादन को लागि र फर्श र फर्नीचर अन्तर्गत प्रयोग गरिन्छ।
कपडा भद्दा सन फरक ठूलो विशेष लाभ। पहिले, यो एक निरपेक्ष पर्यावरण-मित्रता छ। दोश्रो, एक उच्च थर्मल चालकता। तेस्रो, बल र स्थायित्व। साथै, यो सामाग्री, लगभग बिजुली airtight छ। सनी धेरै मूल्यवान स्वच्छ गुण छ। उदाहरणका लागि, पूर्ण चिस्यान र गर्मी हटाउँछ। तातो मौसम, एक मानिस जस्तै लुगा मा ऊतक (विशेष गरी सिंथेटिक्स) को अन्य प्रकार भन्दा धेरै कूलर महसुस।
खैर, वैज्ञानिकहरूले लामो सिद्ध भएको छ कि sock सनी किनभने यसको bacteriological गुण केही रोगहरु रोक्न सक्षम सामाग्री। यो पुछ्ने कुनै पनि जीवाणु वा ढुसी प्राप्त गर्न सक्दैन। सन पनि विभिन्न संक्रमण मार्न सक्नुहुन्छ। धेरै छिटो यस्तो अन्तर्गत घाउ ड्रेसिङ निको। को सनी विभिन्न ब्याकटेरिया विकास constraining, सिलिका समावेश भन्ने तथ्यलाई। मिति यसलाई सर्जरी प्रयोग suturing गर्दा मात्र सामाग्री छ।
शोषण को प्रश्न रूपमा, राम्रो picky डेनिम। Uncolored र सेतो तन्ना नब्बे डिग्री मा धोए गर्न सकिन्छ। सामाग्री पनि जोश गर्न सक्नुहुन्छ। को रंग कपडे को उत्पादन चालीस डिग्री भन्दा उच्च एक तापमान मा धोए गर्न सकिन्छ। यद्यपि, भ्याट रङहरू उत्पादन प्रयोग भने, उच्च तापमान हानि गर्दैन।
कुनै पनि मामला मा, मोड र ऊतक यस प्रकारको लागि विशेष डिजाइन एक विशेष उपकरण बख्शते लुगा धुने आवश्यक छ जब। त्यो क्लोरीन र विरंजन एजेन्ट को साथै बिना छ। अन्यथा सन फाइबर तीव्र विनाश आउँछन्।
धेरै सजिलै यो कुरा Wrinkled। त्यसैले यसलाई बाहिर को विस्तार फारम सुख्खा सबै भन्दा राम्रो छ। यस मामला मा, उत्पादन मा "झुर्रियाँ" रहन छैन। साथै, तिनीहरूले ताजा गंध हुनेछ। म धेरै छिटो र तुरुन्तै फैलियो आवश्यक छैन hesitated, सन गोली।
उहाँले अलिकति नम, वा भिजेको gauze द्वारा ironed। यो पनि एक भाप फलाम सुविधा। दुई सय डिग्री तापमान भन्दा बढी हुँदैन।
अन्य विकल्प र प्रयोग को स्कोप
टिकाऊ घर्षण प्रतिरोधी सामाग्री केही आधारभूत प्रकार विचार गर्नुहोस्। यसबाहेक, यो वैकल्पिक सन हुन सक्छ। Tarp - धेरै कुनै न कुनै कपडा घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र पानी प्रतिरोधी मिश्रित मा भिगो। त्यो सीट कवर र Workwear को निर्माण को लागि लागू गरियो।
राम्रो कुनै न कुनै बीहड कपास कपडा पनि calico छ। यो ओछ्यान तन्ना को उत्पादन को लागि सबै भन्दा मा प्रयोग गरिन्छ।
बाक्लो सेतो कपडा - Gaba, पानी विकर्षक। यो वस्त्र को निर्माण को लागि प्रयोग गरिन्छ।
यो कपडा, एक विशेष बुनाई ऊन वा सँगै कपास संग कृत्रिम फाइबर संग कस बुना - gabardine। किनभने यसको बल भौतिक पुरुषहरु र महिला कोट र सूट को उत्पादन को लागि आदर्श छ।
भद्दा कपास कपडा बाक्लो यार्न टवील बुनाई बनेको Nanka छ। नाम त्यो कहाँ र उन्नाइसौँ शताब्दीमा फिर्ता ल्याइयो नानजिंग, को चिनियाँ शहर धन्यवाद प्राप्त भयो। यो सिलाई लुगा र प्राविधिक उद्देश्यका लागि प्रयोग भएको थियो।
स्टाइलिश र सुरक्षित
को पाठ्यक्रम, त्यहाँ छ, र अन्य तंग डेनिम। उदाहरणका लागि, ploskon (सन फारमहरु मा उत्पादन), टवील, ट्वीड (सूट र कोट लागि डिजाइन) क्यानभास (सामने पक्षमा स्थित विकर्ण स्ट्रिप्स संग) (सादा बुनाई, शर्ट वा बन्दरगाह लागि)। कुनै पनि मामला मा, तपाईं रोजेको जो विकल्प, यो कपडा एक उच्च शक्ति, स्थायित्व र विश्वसनीयता छ। को दराज एक फरक तत्व प्रयोग गर्दा, त्यो धेरै सुशील र स्टाइलिश देखिन्छ। शब्द - लाभ धेरै!
छोराछोरीको जैकेट पार्क। छोराछोरीको लागि सहज लुगा
10 कारण जूता र जूता लगाएका रोक्न
सेतो साँझ पोशाक - एक outfit मा लक्जरी र नम्रता
एक छाला स्कर्ट उत्तेजना वा शैली हो?
म एक महिना पछि गर्भवती प्राप्त गर्न सक्छन्?
मार्ग "Gelendzhik, सोची" कसरी हटाउन: सबै भन्दा राम्रो
अभिनेत्री Kristina Smirnova: जीवनी
Semenov इवान - पुस्तक एल Davydycheva को नायक
क्रोएसियाली नाम: वितरण, गठन, उच्चारण नियम
स्की क्लब केटा SEVERIN: विवरण, सेवा। रूस मा सबै भन्दा राम्रो स्की केन्द्र
उच्च विद्यालय र प्रवेश परीक्षा को चयन मा व्यावसायिक निर्देशन, प्रशिक्षण: कहाँ वर्ग 11 पछि अध्ययन गर्न जाने